Apache Software Foundation dia nanambara ny fampidirana GitHub | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny lahatsoratra bilaogin'i Apache Software Foundation dia nambara fa hiditra ao amin'ny fiarahamonina loharanom-baovao open source GitHub.
Apache Software Foundation (ASF), dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay mamorona rindrambaiko loharano misokatra eo ambanin'ny fahazoan-dàlana Apache, izay mampivondrona ireo mpamorona, mpitantana ary mpampiditra an-tsitrapo avy amina tetikasa sy fandraisana andraikitra miisa 350 mahery.
Apache dia angon-drakitra misokatra malalaka, miaraka amin'ny tsipika kaody maherin'ny 200 tapitrisa tantanan'ny vondron'olona mpilatsaka an-tsitrapo an'ny mpikambana 730 sy mpizara kaody 7000.
Nandritra ny 20 taona niorenany, XNUMX miliara andalana kaody nohamarinina tamin'ny fanovana mihoatra ny telo tapitrisa.
Miorina amin'ny GitHub ny fotodrafitrasa
Ao amin'ny bilaoginy, ASF dia nanazava fa ny tetikasa Apache tamin'ny voalohany dia nisy serivisy fanaraha-maso roa kinova azo alaina amin'ny alàlan'ny fotodrafitrasa ASF: Apache Subversion sy Git.
Nandritra ny taona maro, tetikasa mitombo isa sy ny fiarahamonina misy azy ireo te hanana ny kaody loharano niavian'izy ireo ao amin'ny GitHub.
Ho an'ny tetik'asa fitaratra tokana, ny fahaizana voafetra ny fampiasana fitaovana GitHub ao amin'ireo tahiry ireo.
Ao amin'ny 2016, ny c FoundationNanomboka nampifangaro ny tahiry GitHub sy ny fitaovana amin'ny serivisiny manokana izy. Io dia namela ireo tetikasa voafantina hampiasa ireo fitaovana tena tsara ao amin'ny GitHub.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanatsara sy nanatsara ary nanamafy an'ity fampifangaroana ity izahay. Tamin'ny faran'ny taona 2018, nangataka ny tetikasa rehetra izahay mba hiala amin'ny serivisy Git anay, hanohana ilay nomen'ny GitHub.
Ity fanovana ity dia nitondra ny fitaovana rehetra tamin'ny tetik'asa, ary nitazona kopia nomanina ho an'ireo fotodrafitrasa. Hoy i Greg Stein, mpitantana fotodrafitrasa ao amin'ny ASF.
Tao amin'ny fanambarana nataon'izy ireo dia nizara izao manaraka izao izy ireo:
"Miara-miasa amin'ny Apache izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filanao ary hanohana tsara ireo tetikasa loharano misokatra lehibe. Faly izahay fa misy fototra matanjaka toy izany hifindra monina sy hivoatra mivantana ao amin'ny GitHub. Raha vantany vao vita ity tetezamita ity dia afaka mifantoka amin'ny fananganana rindrambaiko sy ny fiarahamonina i Apache.
Na miara-miasa amin'ny mpitantana sy mpamatsy loharanom-baovao misokatra amin'ny loharanom-baovao malalaka lehibe indrindra eran'izao tontolo izao isika, toa an'i Apache, ny tanjon'i GitHub dia ny hipetrahan'ny mpamorona rehetra amin'ny alàlan'ny fanohanana ireo vondrom-piarahamonina misokatra, mamaly mahafaly ny filanao tsy manam-paharoa sy manampy ny tetikasa open source, "hoy i Bryan Clark, mpitantana ny vokatra ho an'ireo mpikojakoja loharano misokatra ao amin'ny GitHub.
“Ny GitHub dia manamora ny fiasan'ny mpandrindra, ny famahana ny olana saro-bahana ary ny famoronana teknolojia manandanja indrindra eto an-tany. Ny sehatra dia ahafahan'ny ekipa mampiantrano sy mamerina mijery kaody, mitantana tetikasa ary mamorona rindrambaiko miaraka amin'ireo mpamorona mpampiasa, orinasa ary fikambanana maherin'ny 31 tapitrisa miaraka amin'ny 2 tapitrisa mahery. mpampiasa, ary tahiry maherin'ny 100 tapitrisa ', no mamaky ny lahatsoratra bilaogy.
Amin'ny fampidirana miaraka amin'i GitHub, ny tetikasa ASF dia horaisina amin'ny sehatra tokana izay ahafahan'ireo mpandrindra 31 tapitrisa mampiasa GitHub erak'izao tontolo izao mandinika sy miara-miasa amin'izy ireo, hoy ny fanazavan'i GitHub.
Izao dia vita ny tetezamita, ASF dia afaka mampifantoka ny ezaka ataony amin'ny fampivoarana rindrambaiko sy ny fiarahamonina.
"Niara-niasa tamin'ny Apache izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filan'izy ireo sy hanohanana tsara kokoa ireo tetikasa loharano misokatra izay manao asa lehibe. "Faly izahay fa ny fototra mahavariana toy izany dia mifindra monina ary mitombo mivantana ao amin'ny GitHub," hoy i GitHub nanoratra tamin'ny lahatsoratra iray.
Ity vaovao ity dia tsy mahafaly ny vondrom-piarahamonina mpamorona satria miovaova ny hevitra. Ho an'ny sasany, vondrom-piarahamonina loharano misokatra mifindra any GitHub izay tsy maimaim-poana sy misokatra dia mahalasa saina.
Manontany tena izy ireo raha mieritreritra ny hahita olon-kafa mpandoa hetra toy izao ny ASF. Ho an'ny hafa, miharihary fa hanana mpandray anjara betsaka kokoa ny ASF satria maro ny olona mahafantatra ny fampiasana ireo fitaovana GitHub.
Ary izany dia mety hampitombo ny habetsaky ny fampandrosoana, ny fandraisana anjara, ny fitakiana fanintonana, sns. Mahazo ny tetikasa ASF.
Ho azy ireo, mazava fa hahasoa ny ASF ity fifindra-monina ity, na inona na inona loharano misokatra na tsia ny sehatra GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Apache Software Foundation dia nanambara ny fampidirana GitHub